ဆော့ဝဲလ်နှင့်သုံးစွဲသူများအားအတုအယောင်များထံမှကာကွယ်ခြင်း။ | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2006 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဆော့ဖ်ဝဲ Piracy မှာငါဖတ်ဖူးသမျှထဲမှာအဆိုးဆုံးလည်ပတ်မှုဖြစ်နိုင်တယ်။
ဆောင်းပါးဖတ်ပါ။ Microsoft's Software Protection Platform ဒါက Patriot အက်ဥပဒေလောက်မကောင်းဘူး! (AKA - မင်းရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုကာကွယ်ဖို့လိုတယ်။ မင်းရဲ့လွတ်လပ်မှုတချို့ကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ရင်မင်းရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုကာကွယ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မင်းမျိုးချစ်တစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာပါ။ ) ။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကိုဤအချက်ကိုအတွင်းမှတ်စုတစ်ခုသာပြုလုပ်သင့်သည်
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်အမြတ်အစွန်းအကာအကွယ်ပေးရေးပလက်ဖောင်း - ဆော့ဗ်ဝဲကိုစျေးကြီးစွာနဲ့ခေါင်မိုးမှတစ်ဆင့်အမြတ်ထုတ်ခြင်း။
ငါလူအများစုကသူတို့လိုတဲ့အခါမှသာခိုးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အခိုင်အမာယုံကြည်တယ်။ သေချာတာပေါ့၊ လူအများကအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ခိုးကြလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကအများစုလို့မထင်ဘူး။ Microsoft Software ဟုပြောသောအခါများစွာသောလူများအတွက်ကျွန်ုပ်ပြောနေသည်ဟုထင်သည် IS စျေးကြီး။ ငါမျှော်လင့်ထားတာလည်းမရှိဘူး အစဉ် ထောက်ခံမှုရပြီ ပြီးတော့ - ငါဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုဆက်လက်လည်ပတ်ရန်အတွက်မွမ်းမံမှုများအပေါ်မှီခိုရမည်ကိုငါသိ၏။ ပြီးတော့ - ငါမိုက်ခရိုဆော့ဗ်ဆော့ဗ်ဝဲကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့တိုက်ခိုက်မှုများမှကာကွယ်ရန်အခြားဆော့ဗ်ဝဲကိုဝယ်ယူပြီး install လုပ်ရမယ်ဆိုတာငါသိတယ်။
အတုဟူသောစကားလုံးသည်တိကျသောအသုံးအနှုန်းမဟုတ်ပါ။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်အတုမဟုတ်ပါ။ သေတ္တာများနှင့်စီဒီများဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်အမှန်တကယ် Microsoft ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်သည်။ တရားမဝင်ကူးယူထားသည့်၊ တပ်ဆင်ထားသည့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ကိုတိုက်ဖျက်သည် မ software ကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်လည်းဖောက်သည်များကိုကာကွယ်ပေးသည်။ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းကိုနှစ်သက်သောဖောက်သည်များသည်ထိုကုန်ပစ္စည်းအတွက်အမြဲပေးဆပ်ရန်ဆန္ဒရှိလိမ့်မည်။ (ငါ XP နှင့် Office XP အတွက်ငွေပေးချေခဲ့သည်။ )
၎င်းသည်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကဲ့သို့သောအသိပညာကင်းမဲ့ပြီးလှည့်စားနေသောလှည့်ဖျားချက်ဖြစ်သည်။ ဒီဟာကိုရိုးသားတဲ့သတင်းလို့ယုံတဲ့သူရှိသလား။ ဒီကိစ္စဟာယနေ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမှာပြtheနာဖြစ်တယ်၊ လူတွေကအဲဒါကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်လို့မယုံဘူး။
4:2006 pm တွင်အောက်တိုဘာ 12, 22
မင်းကိုငါယုံချင်တယ်နင် ငါအရမ်းခိုးတဲ့ပေါင်မုန့်တွေကိုခိုးသူရဲ့မိသားစုကိုကျွေးမွေးဖို့သာလိုချင်တယ်။ ငါအရမ်းဒါအမှန်တရားဖြစ်ချင်တယ်
ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ခေတ်မှာ Microsoft ရဲ့ Windows 3. အစောပိုင်းနှစ်တွေအတွင်းမှာဘယ်သူ့ရဲ့ software ကိုမဆိုမိုက်ခရိုဆော့ကိုမြင်တွေ့နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ၎င်းသည်ကူးယူခြင်းသည်မှန်ကန်သည် (သို့သော်) မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါကူးယူ "စိတ်ထဲပုံရသည်" ။ (လုံးဝမမှန်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်အမြင်ဖြစ်သည်။ )
Joe Average သည်ပရိုဂရမ်မာများ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်အတွက်မျှတသောစျေးနှုန်းကိုသာတိတိကျကျကြိုးစားရန်ကြိုးစားနေကြသည့်အကြီးစားစီးပွားရေး - monoliths များကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းခွဲခြားနိုင်စွမ်းရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်မယုံကြည်ပါ။ ထို့ကြောင့်ဂျိုး၏မည်သည့် software သည်သူသို့မဟုတ်သူမသည်မည်သည့်ဥပဒေနှင့်တရားမဝင်သောပုံစံဖြင့်“ အသုံးပြုသည်” ကိုဂရုမစိုက်ပါ။
ဤသည်မှာသိမြင်မှုနှင့်မှားယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည့်အစီအစဉ်တိုင်းအတွက်ပေးဆပ်သင့်သည်။ ဂျိုးပျှမ်းမျှတူညီသောအမြင်ကိုထိန်းသိမ်းသည်ဟုကျွန်ုပ်မယုံပါ။
တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် $ 0.02
4:2006 pm တွင်အောက်တိုဘာ 1, 38
ငါအငြင်းအခုန်ဆွေးနွေးထိုက်သည်ထင်ပါတယ်။ ခိုးကူးမှုသည် software ကိုထိရောက်စွာဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့် software ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုကူညီပါသလား။ ငါအချို့အဘို့ပြုသေချာပါတယ်။
ငါဆော့ဖ်ဝဲများအတွက်ပေးဆောင်သောကြောင့်, ရှေးရှေးပေးဆောင်မယ်လို့စဉ်းစားတွေးခေါ်နုံဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်။ ငါခိုးကူးဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြု။ ပြီးတော့နောက်ပိုင်းတွင်အဖြစ်ကောင်းစွာများအတွက်ပေးဆောင်ခဲ့ဝန်ခံရပေမည်။ တခါတရံမှာရုံးတင်စစ်ဆေးတာကအကန့်အသတ်ရှိတယ်။
ကျွန်ုပ်၏နှလုံးသားထဲတွင် ၀ ယ်လိုအားနှင့် ၀ ယ်လိုအားထိန်းချုပ်မှုသည်စျေးနှုန်းကိုယုံကြည်သည်။ လူတစ် ဦး အား ၀ ယ်ရန်ဖိအားပေးသောထိန်းချုပ်မှုများဖြင့်၎င်းကိုကျော်လွှားရန်နှင့်ကန့်သတ်ခြင်းအားဖြင့်သင်ကလူများကို၎င်းအစားခိုးယူရန်တောင်းဆိုနေသည်။
၀ င်းဒိုးဘယ်လောက်ကျလဲ။ ဒေါ်လာ 400? ဒေါ်လာ ၁၀၀? $ 100 / mo? အဆင့်မြှင့်ထားသောကွန်ပျူတာထက်ကွန်ပျူတာအသစ် (OEM) တွင်အဘယ်ကြောင့်ပိုက်ဆံပိုရသနည်း။ ငါထင်ပါတယ်, စျေးနှုန်းဖွဲ့စည်းပုံမူလကအမှားအယွင်းများဖြစ်ပြီး, Microsoft ကသူတို့ software ကိုပိုမိုတတ်နိုင်အောင်ရိုးရှင်းစွာထက် Piracy အပေါ်အများကြီးပိုက်ဆံဖြုန်းတက်အဆုံးသတ်။
5:2006 pm တွင်အောက်တိုဘာ 8, 56
ငါကအခြားသူတွေကဒီမှာတိုက်ပွဲမှာပူးပေါင်းလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သည် ... ဒါပေမယ့် alas ... ငါအချို့အရှည်တစ်တုံ့ပြန်မှုကိုပြင်ဆင်နှင့်မှာမှာအတူတူတင်ခဲ့သည် Doug Karr အားတုန့်ပြန်ခြင်း…